မယ်သံ: အလှူတစ်ခု ပြီးမြောက်ခြင်း နှင့် သမီးလေးတစ်နှစ်ပြည့်
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, March 27, 2012
NSA March 28, 2012 at 3:06 PM
အချိုပွဲတွေ စားချင်ထှာအေ.....။ ရှလွတ်....။
ဟေမာလေးက တကယ်ကို စနစ်တကျ လက်ဝါးလေးဖြန့်ပြီး ဦးတော်လုပ်တတ်နေတာ.. သိပ်လိမ္မာတာပဲ....။
ဟေမာလေး ၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကစလို့ အသက် ၁၂၀ တိုင် ကျန်းကျန်းမာမာ၊ ချမ်းချမ်းသာသာ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေ....။
မဒမ်ကိုး March 28, 2012 at 3:27 PM
အလှုအတွက်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ပြန်ဖို့လုပ်နေရလို့ အဲဒီ့နေ့က မလာနိုင်ခဲ့ဘူးမမရေ
ဘာသာတရားကိုသိတတ်တဲ့သမီးလေး လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာနဲ့ သမီးကောင်းရတနာလေးအဖြစ်နဲ့ မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်ပါစေ
မြူးမြူး March 28, 2012 at 3:36 PM
အဲ့နေ့ကစားခဲ့တဲ့ဒန်ပေါက် ခုဖတ်နေရင်းနဲ့ပြန်စားချင်လာပြီ..း)
slym March 29, 2012 at 2:00 PM
Great memory that can last to its eternal. Wish you possess such delightful occasion amap in future.
san htun April 2, 2012 at 11:17 AM
သမီးလေးက အတော်ချစ်ဖို့ ကောင်းလာတယ်နော် မမယ်သံ..ဘုန်းဘုန်းတွေ့ တာနဲ့ဦးတော်လုပ်တာ တကယ့်အကျင့်ကောင်းလေးပဲ..သာဓု ခေါ်ပါတယ်...
ကူးကူးလှိုင် November 20, 2012 at 6:36 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ပါနော် ...